Ala ọma jijiji siri ike 6.7 maa jijiji na Chile
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ala ọma jijiji siri ike 6.7 maa jijiji na Chile
Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Chile • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Chileke amaa jijiji site n’ike ala ọma jijiji.
Ala ọmajiji siri ike 6.7 mere na Chile taa, Jenụwarị 20, 2019, na 01:32:51 UTC. Ebe oria a guzobere dị 9.7 kilomita SSW nke Coquimbo.
Dabere na akụkọ na volcanodiscovery.com, ụfọdụ ndị akaebe na-anọ na họtel chere na ọ bụ ihe ike na-eme ka ọ maa jijiji:
Marriot Santiago: N'elu ala nke iri nke 10 na họtel dị na Santiago. Ime ụlọ malitere ịgbagharị, na-ama jijiji na TV, ákwà mgbochi na-efegharị. O wutere m ma mee ngwa ngwa kwaga n'ọnụ ụzọ, na-anọdụ ala n'elu ala ruo mgbe ịgbagharị gbadara mgbe 24 gachara.
Copiapo: Anyị nọ n'okpukpu nke asaa nke à hôtel. Anyị bi na Vanuatu, anyị makwa ala ọma jijiji… N'elu ala nke asaa nke a bụ akụkọ ọzọ. O yiri ka ọ gaghị akwụsị akwụsị… Anyị si na-eche [mgbe ụjọ gasịrị]. Onweghi ihe gbadara n’obodo ma ọ bụ n’agha egosi.
Santiago: Anyị na-ebi na Santiago n'ụlọ nkwari akụ akara ngosi nke dị na 8th, ụlọ ahụ na-ama jijiji. Akpọrọ nnabata ịjụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ala ọma jijiji ma gwa ya mba ọ bụghị. Chaị. Nke ahụ na-ama jijiji.
Vin Del Mar: N'elu ala nke 7 nke ụlọ nkwari akụ 8. Ndina na-ama jijiji, ibo ụzọ na windo na-ama jijiji ruo sekọnd 30 ma ọ bụ karịa.
Santiago: Hotellọ nkwari akụ m nọ na ya. Anọ m n'ala nke isii; mgbidi ya gbawara agbawa, ala ahụ megharịkwara.
15.6 km (9.7 mi) SSW nke Coquimbo, Chile
25.2 km (15.6 mi) SW nke La Serena, Chile
62.3 km (38.6 mi) NNW nke Ovalle, Chile
68.7 km (42.6 mi) W nke Vicuna, Chile
82.1 km (50.9 mi) NNW nke Monte Patria, Chile
Ala ọmajiji ahụ debara na omimi nke 53 kilomita.
ụlọ Chile site ala ala ọma jijiji ala icon January kilomita km LA -ebi ọtụtụ puku kpaliri ala ọma jijiji n'ikuku akụkọ ụlọ Santiago Serena Kwụsị akụkọ ike obodo TV -ABỤ UTC Vanuatu eme ihe ike Ndịàmà CHAỊ